Qaxooti u Qaxaya Dalka Soomaaliya - Wargeyska Faafiye
Home 2014 September 17 .Warka Qaxooti u Qaxaya Dalka Soomaaliya
Qaxooti u Qaxaya Dalka Soomaaliya
September 17, 2014 · by	Liban Farah ·
Hayadaha Qaramada Midoobay ahaa sheegay in xaaladaha dhiillo sida raritaanka qasabka, abaaraha, colaadda iyo la’aanta nololmaalmeedka ayaa qasabtay in ka badan 130,000 oo qof ay ka cararaan dalka Soomaaliya sanadkaan oo kaliya.
Daadkaasi badankood ayaa la sheegay inay ku dhex barakaceen gudaha dalka Soomaaliya, waxaana sidaasi ka digtay hayada Qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNHCR.
Xaalada dhanka amaanka ayaa ah sababtay inay dadka gudaha ku barakacaan, kuwaasi oo gaaraya 38.000 kadib markii isku dhacyo meletari ay ka dhaceen dalka gudahiisa, sidaasi waxaa sheegay afhayeenka hayada UNHCR oo wariyaasha kula hadlay magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
Sida afhayeenka uu cadeeyay sideedii bilood ee lasoo dhaafay waxaa gobolada koofurta iyo bartamaha Soomaliya dagaalada ka dhacaya ku barakacay dad lagu qiyaasay 7,000 oo ruux.
Wuxuu sidoo kale afhayeenka sheegay in dadkaasi ay heysato xaalado dhanka nolosha ah ayna adagtahay mararka qaar in gargaar dhulka ay la gaarsiiyo, in diyaarad loogu geeyo mooyaane.
Hayada ayaa sheegtay in magaalada Kismaayo maalmo ka hor ay gaarsiiyeen gargaar ay ka faa’ideysteen 3,000 oo qoys, laakiin waxaa wali taagan baahida dadkaasi ay qabaan, sida hayada warbixin kasoo baxday lagu sheegay.
“Dadkaasi badankood waxay ku nool yihiin dhismooyin ka sameysay ulo, coys iyo gartoono aan wanaagsaneyn, waxaana lasoo warinayaa dhibaatooyin dadkaasi ay la kulmaan sida kufsiga gabdhaha yar”ayuu yiri afhayeenka yahada Mr Baloch.
Dagaalkii cuslaa ee Jubbada Hoose
Millions Misused While thousands of Somali citizens were dying from famine.
AMISOM oo garoonka Cisaley la wareegtay sheegtay .
Xasan Daahir Oo Muqdisho Lagasoo Dejiyey Xaaladiisu waa sidee ?